Ny fahaiza-mitarika fizahantany mahomby dia mitaky fanabeazana sy fanabeazana mavitrika sy manavao | Vaovao Mafana momba ny dia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fahaiza-mitarika fizahantany mahomby dia mitaky fanabeazana sy fiofanana mavitrika sy manavao
Ny fahaiza-mitarika fizahantany mahomby dia mitaky fanabeazana sy fiofanana mavitrika sy manavao
Dr. Marianna Sigala, Profesora, University of South Australia Business School no vahinin'ny Q&A ankehitriny an'ny World Tourism Network. Modérated avy amin'ny Dr. Elinor Garely.
Miharihary fa ny indostrian'ny fizahantany dia nopotehin'ny COVID-19. Ny fijanonana masiaka, nefa ilaina amin'ny dia dia niteraka fatiantoka asa tsy manam-paharoa eran'izao tontolo izao ary tombanana ho 100.8 tapitrisa ireo mpiasa mpizahatany nesorina tamin'ny toeram-piasana nanomboka ny taona 2019.
Rehefa esorina ny embargo sy quarantine, ary manomboka matoky tena ny mpanjifa fa handao ny sezalava ary hihoatra ny toerana akaiky azy ireo dia hisy ny fitakiana vaovao eo amin'ny sehatry ny fizahantany satria ilay mpandeha "nohavaozina" dia tsy ilay mpitsidika nitety tany ihany izao tontolo izao amin'ny taona 2019.
Mihaona amin'i Dr. Marianna Sigala, Profesora, University of South Australia Business School.
Nojerena indray ny Adventure
Ilay mpitsangatsangana niova dia hitady traikefa fizahan-tany manokana sy tsy miankina, hiala amin'ny toerana efa be mpitia taloha sy traikefa nanohana sy namporisihin'ny mpitsangatsangana sy mpizahatany. Ilay mpitsangatsangana novelomina dia nampivoatra ny fanantenana amin'ny fahadiovana ary toa hifindra amin'ny traikefa fialantsasatra izay mifantoka amin'ny kalitao mifanohitra amin'ny habetsahana. Ity fiovan'ny fifantohana ity dia mety hahasoa ny tsenan'ny dia be dia be ary hiteraka famerenan'ny mpiasan'ny teti-bola ny sary sy ny famaritana ny marika misy azy ireo.
Ny fanafoanana sy ny fanafoanana tsy misy sazy dia ho anisan'ny andrasan'ny mpanjifa aorian'ny areti-mandringana ary ho anisan'ny fehezan-dalàna sy famandrihana. Ireo orinasa manasongadina ny fitoviana dia ho manintona indrindra ho an'ny mpandeha mitandrina sy malina.
Ny fitsangatsanganana an-tsitrapo dia mety hahita fihenan-tsasatra rehefa maneho ny fieritreretan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandaniana fotoana sy ezaka bebe kokoa amin'ny famolavolana mialoha ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny dia. Ny Adventures dia mety hifantoka amin'ny hetsika ivelany toy ny fitsangatsangana, bisikileta, fandehanana an-tongotra ary rano izay hiainga amin'ny fitsangatsanganana an-dranomasina, ary miompana amin'ny yachts manokana, lakana, lakana, kayak ary lomano.
Ny mpandeha vaovao sy ny tian'ny fitsangantsanganana vaovao dia mitaky mpitantana fizahan-tany hijerena ary hanoratra mihitsy aza ny fomba fitantanana ny orinasany. Indostria maro no mandrisika ny mpiasa hanohy hiasa lavitra, mazava ho azy fa tsy safidy amin'ny fizahan-tany satria mila serivisy manokana sy fifanakalozan-kevitry ny mpanjifa / ny vahiny.
Nohavaozina sy voadio ny famaritana ny asa
Ny mpitantana aorian'ny COVID-19 dia takiana amin'ny fananana fitoniana ara-pihetseham-po mihamitombo ary mahay mandanjalanja sy malefaka manoloana ny fisalasalana. Ny fahaiza-manao dia mitaky fahaizana nomerika sy kognita. Ny talen'ny fizahantany mahomby dia tsy maintsy ho mailaka amin'ny haino aman-jery sosialy satria ny fanapahan-kevitry ny fizahan-tany dia mihabetsaka raisina vokatry ny fifandraisan'ny media sosialy sy ny tolo-kevitra ary ny teti-bolan'ny dokambarotra dizitaly dia mety hitombo hatramin'ny 78 isan-jato rehefa mitady hifandray mivantana amin'ny mpanjifany ny orinasa.
Ny mpitantana vaovao dia hifanerasera amin'ny mpiasa, mpanjifa ary mpivarotra ao amin'ny ZOOM ary hizara ny atiny video amin'ny tsena marobe ary vinavinaina fa ny 82 isan-jaton'ny atiny an-tserasera dia ho amin'ny endrika video amin'ny 2022.
Medium.com (2020) dia naminavina fa olona 123 tapitrisa no hampiasa mpanampy am-peo amin'ny fiainana andavan'andro amin'ny faran'ny 2022 ary noho izany dia takiana amin'ny tompon'andraikitra fizahan-tany ny hitazona ny mombamomba ny marketing izay mety ho "hitanana" haingana sy marina avy amin'ireo mpandeha mitady karoka haingana fandikan-teny.
Mitombo ny fepetra takiana amin'ny fifandraisana tsy misy ifandraisany ary ny mpitantana dia tokony ho marani-tsaina amin'ny teknolojia mba hahazoana sy hitazomana ny haitao izay manome traikefa tsy misy tohiny avy amin'ny famandrihana, fisoratana anarana ary fandoavam-bola, ho an'ny serivisy ao anaty efitrano, ny fisarihana ary ny fandaharam-potoana.
Hatramin'ny 2017, ny fanadihadihana iray an'ny McKinsey Global Institute (MGI) dia nanombana fa ny 14 isan-jaton'ny mpiasa manerantany dia mila havaozina manontolo, miaraka amin'ny 40 isanjato mila famerenana amin'ny ampahany mba hanohizana ny asany ankehitriny. Ny mpitarika orinasa nohadihadian'ny MGI dia nanondro fa maika ny fepetra takiana, miaraka amin'ny 70 isan-jaton'ny mpitantana amerikana sy eropeana miresaka momba ny filàna famerenana amin'ny 2020.
Ny tatitra momba ny asa any amin'ny toeram-pianarana 2020 an'ny LinkedIn dia manohana an'ity fikarohana ity izay manambara fa ny 99 isan-jaton'ny mpitantana ny fianarana sy ny fampandrosoana dia mino fa raha tsy mikatona ny banga fahaiza-manao ao anatin'ny 3-5 taona ho avy dia hisy vokany ratsy eo amin'ny fiainana ny mpanjifa sy ny fahafaham-po. Raha tsy misy fitaovana fitantanana vaovao, ho simba ny fampandrosoana sy ny fanaterana ny vokatra ary ny fahafahan'ny orinasa manavao zava-baovao, ka hiteraka fihenan'ny fitomboana.
Ny tatitry ny LinkedIn dia mitanisa 57 isan-jaton'ny mpamorona talenta mifantoka amin'ny fahaiza-mitarika sy fitantanana, 42 isan-jato manasongadina ny filàna famahana olana sy fahaizana misaina famolavolana ary 40 isan-jato manasongadina ny filàna fahaiza-manao fifandraisana nohatsaraina.
Fanabeazana sy fampiofanana
Ny oniversite sy ny anjerimanontolo erak'izao tontolo izao dia hotendrena amin'ny famolavolana ny fandaharam-pianarana hanomanana ny mpianatra amin'ny toerana miditra ary hitondra haingana ireo mpitantana ankehitriny ho an'ny fahombiazan'ny asa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Ny fahaiza-manao vaovao dia mitaky mpiasa:
Miasa tanteraka amin'ny tontolo dizitaly tanteraka. Ilaina ny fifandraisana tsy misy tohana amin'ny ekosistra an'ny fikambanana: vahiny, mpiara-miasa, mpamatsy, mpiasa, mpampiasa vola, ary manampahefana. Ny mpiasa rehetra dia mila fahatakarana ifotony ny teknolojia mitsikera, ny angona momba ny angona, ary ny fizotrany ao anatin'izany ny sary an-tsary, ny fianarana milina ampiharina ary ny fanadihadiana lalindalina.
Mahatsiaro ny fahaizany mifantoka amin'ny famolavolana endrika sy fanavaozana. Ny famolavolana ny habakabaka (s) dia hihoatra ny fanaka sy ny fitaovana manintona mba hahitana ny rafitra haino aman-jery HVAC, ny metatra mifandraika amin'ny halaviran'ny fiaraha-monina, ny fanadiovana ary ny fampidirana ireo robotika ao amin'ny toeram-piasana.
Matsilo ara-tsosialy sy ara-pientanam-po mba hiantohana ny fiaraha-miasa mahomby, fitantanana ary fanehoana tena. Ireo fahaiza-manao ireo dia hahafahan'ny mpiasa mamorona sy mampivelatra ny fifandraisan'ny mpanjifa / ny vahiny, ny fanovana fiara ary ny fanampiana ireo mpiasa. Mila fahaizana mandroso sy mifampiresaka eo amin'ny samy olona ny mpitondra, ao anatin'izany ny fiaraha-miory.
Azo ampifanarahina sy azo zakaina mba hahatafavoaka velona amin'ny fikorontanan'ny COVID-19. Ny mpitantana sy ny mpanatanteraka dia hampiasa ny traikefany amin'ny areti-mandoza ho loharanom-pahalalana ary hampiditra ny haavon'ny fahatsiarovan-tenany ho an'ny fahatokisan-tena sy ny fizakan-tena. Ny mpitantana manavao dia antenaina hitantana ny fotoanany manokana sy matihanina ary koa ny fotoana sy ny ezaka ataon'ny mpiasa, eo am-pananganana sy hitazomana fetra.
Manam-pahaizana sy mpanavao
Mba hamahana ny olan'ny fitantanana sy ny mpiasa atrehin'ireo mpitantana fizahantany rehefa miverina ny indostria, ny vahiny ao amin'ny Tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahan-tany dia i Doctor Marianna Sigala, mpampianatra ao amin'ny mpampianatra ao amin'ny University of South Australia Business School.
Dr. Sigala dia nahazo ny mari-pahaizana PhD avy amin'ny University of Surrey ary mari-pahaizana momba ny fianarana akademika mandroso avy amin'ny University of Strathclyde. Manana mari-pahaizana Master momba ny fizahantany fizahantany avy amin'ny University of Surrey izy. Nahazo ny BA avy amin'ny Oniversiten'i Athens of Economics and Business any Greece izy, ary diplaoma Postgraduate avy amin'ny University of Lancaster. Izy dia nifandray tamin'ny University of the Aegean (Greece).
Profesora Sigala dia namoaka sanganasa maro izay mifantoka amin'ny fitantanana ny asa, ny fampahalalana ary ny fifandraisana amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fandraisam-bahiny. Amin'izao fotoana izao dia izy no mpiara-mamaky ny Gazety iraisam-pirenena momba ny serivisy momba ny serivisy sy ny fampiharana ary ny tonian'ny International Journal of Hospitality and Cases. Sigala dia tao amin'ny filankevi-pitantanana ho an'ny federasiona iraisam-pirenena momba ny teknolojia fampahalalana, fizahan-tany sy fizahan-tany (IFITT), ny filankevitra iraisam-pirenena momba ny fampiantranoana, ny fisakafoanana ary ny fanabeazana andrim-pianarana (I-CHRIE), ny Hellenic Association of Information Systems (HeAIS) ary ny Birao mpanatanteraka ao amin'ny filankevitra eoropeanina momba ny fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana ary fanabeazana andrim-panjakana (EuroCHRIE).
Amin'ny maha manam-pahaizana manokana momba ny fizahantany azy dia nahazo ny mari-pankasitrahana ny EuroCHRIE Presidents 'Award i Sigala noho ny fandraisany anjara sy ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fandraisana vahiny.